Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: Manitsakitsaka ny fahafahana maneho hevitra ny governemanta tetezamita · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2009 16:20 GMT 1	 · Mpanoratra Mialy Andriamananjara Nandika Lila
Sokajy: Madagasikara, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Politika
Mampidi-doza ny fahafahana maneho hevitra aty Madagasikara ny fanapahan-kevitra noraisin'ny governemantan'i Andry Rajoelina, filoha mpitarika ny Fitondrana Avon'ny Tetezamita.
Ny voalohany amin'izany dia ny fisamborana mpanao fihetsiketsehana 3, ny malaza amin'ireny dia Razily, ilay tovolahy hita amin'ny sary mihetsika fa nitondra sainam-pirenena, talohan'ny nanipazana azy tao anaty fiara sy novonoin'ny miaramila.
Araka ny tenin'ny mpamaky iray ao amin'ny Madagascar Tribuen:
“Endrika inona re ity!!! Olona tokana manofahofa ny sainam-pireneny nosamborin'ny miaramila tsy misy indrafo, miaramila natao hiaro ity sainam-pirenena ity. Izy indray aza no natosika ho ao anaty fiara!.”
Hatramin'izao dia mbola tsy fantatra mazava aloha izay nanjo an-dRazily, kanefa nomarihan'ny tontolon'ny internet Malagasy ho mahery fo izy. Toa tsy dia miraharaha ny momba azy kosa ireo mpanao gazety mahazatra. Ny mpampiasa filazam-baovao hafa, tahaka an'i Solofo Rafeno, ao amin'ny twitter sy ny bilaoginy, no mivoy ny tokony hamotsorana an-dRazily sy ireo olona 2 hafa nosamborina niaraka taminy. Manontany koa i Solofo hoe nankaiza ilay mpanao gazety mpanohana an-dRavalomanana tsy hita popoka hatramin'ny niovan'ny fitondrana.
Misy fanangonan-tsonia hitakiana ny hamoahana an-dRazily ao amin'ny Facebook ankehitriny.
Ny alahady lasa teo dia notazonin'ny governemantan'i Andry Rajoelina ny fitaovan'ny radio Fahazavana sy ny radio sy fahitalavitra Mada, izay samy onjam-peo manohana ny filoha naongana Ravalomanana.
Mydago.com no mitantara ny nanakatonana ireo radio ireo:
“nandritra ny andron'ny Tompo ny 19 aprily dia nopotehan'ny miaramila avy ao amin'ny Capsat ny Radio Kristianina Fahazavana sy ny radio sy fahotalavitra Mada. Aoka ho fantatra fa efa andro maromaro izay dia nanelingelina loatra ireo radio ireo ary nahasorena mihitsy ny fitondrana vaovao avy amin'ny fanonganam-panjakana taty Madagasikara. Tsaroantsika eto fa andro maromaro izay dia ohatra fotsiny ny fifangaroana onjam-peo nihatra tamin'ny radio Mada. Ambonin'izany dia fantatra koa fa misy faneriterena mahazo ireo mpanao gazety avy amin'ny radio sy fahitalavitra an'ny fanjakana (RNM sy TVM).”
Ny tena mampihomehy dia nakaton-dRavalomanana tamin'ny herisetra ny fahitalavitra VIVA an'i Andry Rajoelina ny volana desambra 2008, raha nandefa kabary nataon'ny filoha taloha, Ratsiraka, izay nanakiana an-dRavalomanana ary nanmporisika ny Malagasy hitroatra.
“Ny alahady lasa teo, manoloana ny famirapiratry ny mazava dia namerina ny fanapahan-kevitra tsy mendrika hampangina ny fahitalavitra Viva i Andry Rajoelina sy Gilbert Raharizatovo ka nanandrana koa nanakatona ny Radio Fahazavana sy ny Radio Mada.”
Nanakatona ny TV Viva Ravalomanana, nikarakara fihetsiketsehana teny an-dalam-be i Andry Rajoelina nitakiana ny hanokafana indray ny TV VIva, ary nanambara am-pahibemaso ny tsy fanajana ny fahafahana maneho hevitra sy ny tsy fisian'ny demokrasia, ary nanondro an-dRavalomanana ho “mpanao didy jadona”. Nanaraka iny krizy iny ny Global Voices tamin'ny fandaharana manokana.
Izao anefa vao tsy ampy 6 volana akory aty aoriana, rehefa nahazo fitondrana i Andry Rajoelina niaraka tamin'ireo mpanara-dia azy, ary nanambara fa nahazo fahafahana sy nandresy ny didy jadona, dia izay indrindra no nataony raha nandrahona ny hanakatonana ireo radio sy fahitalavitra ireo izy, tsy mahalala menatra manoloana ireo mpanao gazety sy mpitoraka bilaogy, fa mandrara ny fanaovana fihetsiketsehana ary mitifitra azy ireo, izany rehetra izany dia lazainy hoe hitandroana ny rariny sy ny filaminam-bahoaka; zavatra mahagaga ihany ho an'ny governemanta izay vao 2 volana monja izay dia nampiasa ny fihetsiketsehana an-dalam-be sy ny fanalana baraka ary ny herisetra hahatongavana eo amin'ny fitondrana.
Manoloana ny herisetra sy ny fandrahonana dia fivarotana sy orinasa maro no nikatona, voaroaka avokoa ny mpiasa tao aminy, ny lafiny fizahan-tany izay namiratra tokoa tany aloha satria nanpiditra vola 350 tapitrisa dolara dia rendrika, foana ny trano fandraisam-bahiny. Nanolotra vahaolana ny governemantan'ny HAT fa ny saran'ny fahazoan-dalana miditra eto Madagasikara izay 60 dolara teo aloha dia tsy andoavam-bola kosa ankehitriny, izay fanapahan-kevitra tsy dia ampy hanarenana ny fizahan-tany.
Ny governemantan'ny HAT izay nanambara tamin'ny volana lasa fa tsy ilaina ny fifidianana satria efa naneho ny heviny teny an-dalam-be ny vahoaka no mandrara ny fivoriam-bahoaka indray ankehitriny. Araka ny voalazan'ny The Cyber Observer:
“Anio talata 21 aprily, dia nanao fivoriana manokana teny Iavoloha ny priaministra Monja Roindefo. Notapahaha tamin'izany fa manomboka ny alarobia 22 aprily dia tsy azo atao ny manao fivoriam-bahoaka manerana an'i Madagasikara mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Mba hitandroana ny filaminam-bahoaka (aoka ho tsaroana eto fa raha vao niakatra teo amin'ny fitondrana i Andry Rajoelina dia nanambara fanjakana anaty fahamehana manerana an'i Madagasikara), tsy maintsy nandray izay fe-petra izay ny fanjakana. Kanefa amin'ny lafiny iray hafa, manoloana ny tsy fankasitrahana miseho lany manerana ny nosy dia fahendrena ve ny fandrarana tahaka izao?”
Ny alatsinainy 20 sy ny talata 21 aprily dia vahoaka marobe no nivory tao Ambohijatovo tsy nanaiky ny fanakatonana ireo radio izay mpomba an-dRavalomanana. Indrisy anefa fa naka tahaka ny fanaon-dRavalomanana i Andry Rajoelina ka nandrava tsy nisy indrafo ireo mpanao fihetsiketsehana, nampiseho fa raha tsy eo intsony Ravalomanana mpanao didy jadona dia tsy nahatazona ny teny nomeny hampanjaka ny fahafahana sy ny demokrasia eto Madagasikara i Andry Rajoelina. Anankiray amin'ireo fanakianana nataon'ny mpanara-dia an'i Andry Rajoelina tamin-dRavalomanana ny fampiasana sivily mitondra fitaovam-piadiana mifangaro amin'ny miaramila nandritra ny fandravana ny fihetsiketsehana. Ankehitriny dia ahitana sivily koa any anatin'ny miaramila ary mitondra fitaovam-piadiana, ny sasany amin'ireny aza dia hita manome baiko ny miaramila, raha mitifitra tsy misy fampandrenesana izy ireo, ary araka ny tenn'ny vavolombelona dia mampiasa bala tena izy ry zareo.
Araka ny vavolombelona, ny Associated Press sy ny BBC dia olona 2 no maty ary 15 no naratra ny alatsinainy 20 aprily.
“I Johnny Hogg avy ao amin'ny BBC no nahita farafahakeliny olona iray notifirina avy aty aoriana ary fiara maro no nirehitra nanoloana ny tranom-panjakana. “
“Nilaza ny Radio Madagasikara fa maratra maro no nentina teny amin'ny hopitaly lehibe teto Antananarivo. Tsy nisy ny fanamarinana ny vaovao momba ireo maratra sy maty.”
“Mpanao gazety iray avy ao amin'ny Associated Press no nahita andian'olona nanao sakana sy nandoro fiara tao an-drenivohitra, ny korontana tena lehibe indrindra dia ny teny akaikin'ny zaridaina izay nanjary toerana famoriam-bahoaka sy fanaovana fihetsiketsehana.
Ny mpanara-dia ny filoha voaongana Rvaalomanana no nanao an-terisetra hisitra ao amin'ity toerana ity na dia teo aza ny fandrarana tsy hanao famoriam-bahoaka nolazain'i Andry Rajoelina izay narahan'ireto miaramila miaraka amin'ity farany ka nisy ny fifandonana.”
Saika hiditra tao amin'ny hopitaly HJRA ny miaramila, izay toerana nitondrana ireo maratra, noho ny antony tsy fantatra, kanefa voasakan'ny mpanao fihetsiketsehana izany.
Manazava ny antony saika hidiran'ny miaramila tao amin'ny hopitaly ny Cyber Observer:
“Araka ny filazan'ny vavolombelona nanatri-maso dia olona 2 no matin'ny miaramila teny Anosy. Nohamarinin'ny vaovao tao amin'ny radio Fahazavana izany (vao nandeha indray nanomboka androany tamin'ny 13h30 izany radio izany araka ny fahazoan-dalana nomen'ny minisitry ny fifandraisana). Eny amin'ny tranom-patin'ny hopitaly HJRA ireo razana ireo.
Araka ny vavolombelona hafa koa dia tonga teny amin'ny hopitaly ny miaramila haka ny fatin'ireto olona 2 ireto. Nirongo fitaovam-piadiana izy ireo. Tsy navelan'ny olona nitangorona teo amin'ny hopitaly hiditra anefa izy ireo. Amin'izao fotoana hanoratako izao dia miantso ny mponina hiaro ny HJRA ny Radio Fahazavana”
Ny volana febroary lasa teo, nandritra ny “asabotsy mena” dia maty ny mpanao gazety mpaka sary tao amin'ny RTA, Ando Ratovonirina, raha iny izy niaraka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana iny ka notifirin'ny miaramila mpiambina ny filoha Ravalomanana, ar tsy nanaiky ny olona tamin'izay. 2 volana aty aoriana dia lavo am-perin'asa koa ny mpanao gazety iray mbola an'ny RTA ihany, novonoin'ny miaramila'ny governemantan'i Andry Rajoelina.
Mbola tsy voafehin'ny Malagasy ny fahafahana maneho hevitra. Manao fanadihadiana i Fijery mikasika ny maha tsinontsinona ny tontolon'ny fanaovan-gazety eo amin'ny fiainan'ny Malagasy:
“…Inona koa izay ain'ny mpanao gazety ao amin'ny tany izay ny masina indrindra tahaka ny lalàam-panorenana aza no voahosihosy? Nitondra ny mafy tokoa ny tontolon'ny fanaovan-gazety tamin'ity krizy ity, tamin'ny alalan'ireo olona 2 maty sy ireo marobe niharan'ny herisetra. Ary noho ny fahambanian'ny fanajana ny fanaovana politika sy ny mpanao politika eto amin'ny firenentsika dia tsy ilain'ny mpanao gazety velively ny mitondra ilay foto-kevitra nataon'i Jean Jacques Rousseau hoe Vitam impendere vero.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/04/30/2132/